Naya Drishti | उपचारको लागी दिल्ली जानु अघि ओली र झलनाथ बिच भावुक फोन संवाद : के भए कुराकानी ? - Naya Drishti उपचारको लागी दिल्ली जानु अघि ओली र झलनाथ बिच भावुक फोन संवाद : के भए कुराकानी ? - Naya Drishti
उपचारको लागी दिल्ली जानु अघि ओली र झलनाथ बिच भावुक फोन संवाद : के भए कुराकानी ?
असार ०२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाललाई उपचारका लागि दिल्ली लैजानुअघि टेलफोनमार्फत स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।
खनालको भनाइ उदृत गर्दै बुढाथोकीले भने, ‘हिजो के-के भयो सबै तीता – मीठा बिर्सेर पार्टी एकता जोगाउनुस् कमरेड । म फर्केर आउँछु कि आउँदिन त्यो पनि थाहा छैन तर यो पार्टी एक रहोस् । तपाईं मुख्य ठाउँमा हुनुहुन्छ मिलाउनुस्, मेरो यही चाहना छ ।’
नेपाल प्रेस बाट साभार ।